China Linaclotide factory na-emepụta | JYMed
Product aha: Linaclotide
Molekụla Formula: C59H79N15O21S6
Molekụla ibu: 1526,8 g / mol
Ngwa: ji na-emeso agbakasị bowel syndrome na ntachi na-adịghị ala ala afọ ntachi na-enweghị mara akpata
Ngwa: eji maka mmezi ntachi
Nchekwa: 2 ~ 8 ℃. echebe site ìhè
okwu ọzọ: Linaclotide Acetate
CAS Ee: 851199-59-2
molekụla arọ: 1526,8
Ọdịdị: White powder
usoro: NH2-Cys-Cys-Glu-Tyr-Cys-Cys-Asn -Pro-ala-Cys-Thr-Gly-Cys-Tyr-OH
Linaclotide bụ a sịntetik, iri na anọ na amino acid peptide na agonist nke nsia guanylate cyclase ụdị C (GC-C), nke bụ structurally yiri ka guanylin peptide ezinụlọ, na secretagogue, analgesic na laxative eme. N'elu onu ochichi, linaclotide ejikọ na na activates GC-C anabata emi odude ke luminal elu nke nsia epithelium. A na-enwekwu ịta nke intracellular cyclic guanosine monophosphate (cGMP), nke na-ewepụtara guanosine triphosphate (GTP). cGMP activates cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) na-akpali secretion nke chloride na bicarbonate n'ime nsia lumen. Nke a na-akwalite sodium excretion n'ime lumen na utịp ke ụba nsia ọmụmụ secretion. Nke a n'ikpeazụ accelerates gị n'ụzọ nke nsia ọdịnaya, mma bowel ije na aka ntachi. Mụbara extracellular cGMP etoju nwekwara ike ịdọgbu ihe antinociceptive mmetụta, site na ka nke ma ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu elucidated usoro, nke ahụ pụrụ ịgụnye mgbanwe olu nke nociceptors hụrụ na colonic afferent mgbu emep uta eri. Linaclotide na-minimally etinye obi gị dum na Gi tract.
Linaclotide Acetate ekspootu
Linaclotide Acetate Gmp ekspootu
Linaclotide Gmp Provider Site China
Linaclotide Gmp Supplier Site China